I-DJ Drop Yevidiyo Yokwezifiso
I-DJ eqondayo ofuna ukwenza umthelela omkhulu ngokuthatha uphawu lwaso lomuntu kwizinga elilandelayo. Kuze kumasekhondi angu-30 wezingqikithi ezibukwayo ezibukwayo ezizungezile isitayela sakho kanye nomkhiqizo wakho. Kuhle kakhulu ukwakha isethi esiyingqayizivele esizokwenza ukuthi izithameli ziqiniswe ngenkathi ziqinisa isikhundla sakho njenge-life-of-the-party esemthethweni!
SKU: I-CustomDjVidDrop Isigaba: Ukukhangisa
Kuze kube ngamasekhondi angu-30. Yenziwe ngokwezifiso. Uma sithengiwe, sizobe silandela nawe ukuze uthole ukuzizwa ngesitayela sakho nezintandokazi zakho.
Ukukhiqizwa Kwemidlalo Yomdabu - I-60 Radio Commercial
Enye yevidiyo yethu ye-dj ethandwa kakhulu emhlabeni wonke. Kutholwa ngemuva kwe-"NYE Countdown 2013" yethu ehloniphekile, senze lesi sifundvo sevidiyo se-JUST RE for DO! Igama lakho neqembu noma inkampani yenkampani yengezwa kule vidiyo enhle ngaphandle kwecala elengeziwe. "AMESESHAMI NEMIBUZO, ngingabe nginakho ukunakekelwa KANYE NOKUBA NAKUBA! SIGNORE E SIGNORI, ungabe usho ukuthatha i-vostra attenzione nge-favore! IZINDABA NAMAGENTLEMEN INGABE NGINGIQONDELELE UKUTHI? 'KUKHULU NGOKUPHILA.' Nakhu siyahamba! ' (ukuqhuma) i-Dj (NAME yakho) kusuka (CLUB noma COMPANY - CITY / TOWN) ... I-Bitches! " (ngokuzikhethela)
Ithelevishini ye-Incredible nezindawo zeWebhu ezizoqothula amasokisi akho ... kuLWIMI LONKE! Masisebenzise i-Telly Award yethu yokuwina amakhono wokukhiqiza okusakaza ukudala ukuletha izimbongolo ngokusebenzisa iminyango yakho ngo-Eva Wonyaka Omusha! Isikhathi sokuguqula yisikhathi sezinsuku zebhizinisi ze-5-7 ... ngakho HURRY ngaphambi kwesikhathi kuphelile! Buka lethu i-demos yezohwebo zevidiyo. Ngemuva kokuthenga, ithimba lethu lizokuxhumana nawe ukuhlela umhlangano wamasu ukuze unqume imininingwane yendawo yakho ye-TV.
Iwebhusayithi Yokubhalisa Iphakheji - Ibhizinisi
Ukuthengwa kwesizinda nokuvuselela Ukusingatha ukuqapha Ukunikezelwa kweService Server Organic SEO Ukuhlola Isitifiketi Sokuvikeleka KwamaSayithi nokuqukethwe okubukwayo (kufika kumahora we-2 / ngenyanga) Ideskithophu Ephendulayo ...